NTFS Weghachi Ngwá Ọrụ. Naghachi-ehichapụ faịlụ na NTFS Ọkwọ ụgbọala.
DataNumen NTFS Undelete bụ kasị mma ngwá ọrụ iji naghachi ehichapụ faịlụ na nchekwa na NTFS draịva. Ọ na - eji teknụzụ dị elu elee anya wee chọta faịlụ na folda ehichapụ, wee weghachite ha niile iji weghachite most data dị mkpa.
Cheta na: DataNumen NTFS Undelete bụ freeware. Inwere ike ibudata, jiri ma kesaa ya kpamkpam.
4.90 / 5 (site na 1,651 votes)
Gịnị mere DataNumen NTFS Undelete?
Main Akụkụ na DataNumen NTFS Undelete v2.0
Nkwado na nsụgharị niile nke NTFS usoro.
Nkwado iji weghachite faịlụ ehichapụ.
Nkwado iji weghachite iyi ndị metụtara faịlụ ndị ehichapụ.
Nkwado iji nyochaa data disk kpamkpam ma chọọ faịlụ ehichapụ nke ihe karịrị ụdị 70 a ma ama, site na iji usoro ọkachamara dị n'ime ya nwere ọtụtụ ihe ọmụma banyere njirimara na usoro nke ụdị faịlụ ahụ.
Nkwado iji naghachi-ehichapụ faịlụ site na egweri biini.
Nkwado iji weghachite folda ehichapụ na folda folda niilerarChy recursively.
Nkwado ịnyegharị faịlụ na folda na-akpaghị aka mgbe oyiri dị.
Jiri ngwa ọkachamara dị mfe iji kụziere gị ị gafere usoro mgbake ahụ n'ụzọ dị mfe ma rụọ ọrụ nke ọma.
Nkwado iji dozie ma dozie faịlụ na nchekwa ndị ehichapụ dị ka njirisi dị iche iche.
iji DataNumen NTFS Undelete ka ikpochapu faịlụ na NTFS Ndị na-anya ụgbọ ala
Perman na-adịgide adịgide ehichapụ faịlụ ma ọ bụ nchekwa site na gị NTFS draịva n'amaghị, ma ọ bụ na ị bupụrụ gị egweri biini tupu ị na-ahụ na e nwere ihe dị mkpa na ya. Gịnị ka ị ga-eme?
Enweghị nchekasị. DataNumen NTFS Undelete nwere ike inyere gị aka. Nwere ike iji ngwa ọrụ a dị ike iji nyochaa draịva ahụ, chọọ faịlụ ndị ewepụ site na ndudue, weghachite ha wee nweta most bara uru data azụ gị.
Start DataNumen NTFS Undelete. Ga-ahụ "Start Ọkachamara "peeji nke, nke ga-egosipụta isi ọrụ a rụrụ na usoro a na - ewepụghị:
bọtịnụ gaa nzọụkwụ ọzọ.
Cheta na: Tupu agbake ehichapụ faịlụ na NTFS draịva na DataNumen NTFS Undelete, ị ga - aka karịa imechi ngwa ọ bụla.
Na ibe a, edere draịva niile na kọmputa gị, dị ka ndị a:
Na ndepụta ahụ, ị ​​nwere ike ịhọrọ otu ma ọ bụ otutu NTFS draịva ebe ịchọrọ ịlele ma weghachite faịlụ na folda ehichapụ, wee pịa
Na ibe a, draịva ịhọtara na nhọrọ ị setịpụrụ maka usoro nyocha ahụ edepụtara maka gị iji kwenye:
Ọ bụrụ na ihe niile dị mma, biko pịa
bọtịnụ ka starT i scanomi usoro.
Na ibe a, DataNumen NTFS Undelete ga-i scanomi gị draịva na ịchọ recoverable faịlụ na nchekwa:
ga-egosi na i scanomi ọganihu.
Mgbe usoro nyocha ahụ, ọ bụrụ na enwere ike iweghachite faịlụ ma ọ bụ folda ọ bụla, ị ga-ahụ igbe ozi dị ka nke a:
Pịa bọtịnụ "OK", mgbe ahụ anyị ga-aga na ibe na-esote.
N’etiti peeji a, edepụtara faịlụ niile ehichapụ na-achọpụta na enwere ike iweghachite n’oge usoro nyocha gara aga. Ọ bụrụ na ị gbanye "Nyocha maka nchekwa ehichapụ nke nwere ike iweghachite" na nhọrọ nyocha, edepụtara folda ahụ ehichapụ na enwere ike iweghachite.
N'ime ndepụta ahụ, ịnwere ike ịhọrọ otu ma ọ bụ ọtụtụ faịlụ ma ọ bụ folda ịchọrọ ịgbake, wee pịa
bọtịnụ gaa nzọụkwụ ọzọ. Nwere ike iyo ma ọ bụ dozie ndepụta ahụ ka ị nwee ike ịchọta ngwa ngwa ngwa wee mepụta nhọrọ ahụ.
Na ibe a, ị nwere ike ịhọrọ folda mmepụta maka faịlụ na nchekwa echefubeghị:
Ọzọkwa, ị nwere ike ịtọ nhọrọ mgbake ndị ọzọ ebe a. Mgbe nke ahụ mechara, biko pịa ebe a
Na ibe a, faịlụ na folda ị họọrọ iji gbakee, yana folda mmepụta na nhọrọ ị setịpụrụ maka usoro mgbake ka edepụtara maka gị iji kwenye:
bọtịnụ ka start usoro mgbake.
Na ibe a, DataNumen NTFS Undelete ga-agbake faịlụ na nchekwa na ị họrọ si draịva gị dị ka mgbake nhọrọ ị setịpụrụ, na mmepụta ha n'ime mmepụta nchekwa ị kwuru.
Mgbe mgbake usoro, ọ bụrụ na ihe ọ bụla ehichapụ faịlụ ma ọ bụ nchekwa na-natara nke ọma, ị ga-ahụ a ozi igbe dị ka nke a:
Ugbu a, i nwere ike imeghe mmepụta ndekọ na ịnweta niile natara faịlụ na nchekwa.
DataNumen NTFS Undelete A tọhapụrụ 2.0 na Septemba 16, 2014
DataNumen NTFS Undelete A tọhapụrụ 1.5 na October 27, 2009
Meziwanye arụmọrụ nke usoro nyocha.
DataNumen NTFS Undelete 1.0 wepụtara na July 16, 2009
Kwado aha faịlụ unicode na aha nchekwa.
Nweta lost na ehichapụ faịlụ na draịva gị ma ọ bụ diski.